Fitateram-bahoaka :: Vitsy sisa ireo taksibe mampiasa tsiranoka fanasan-tanana • AoRaha
Fitateram-bahoaka Vitsy sisa ireo taksibe mampiasa tsiranoka fanasan-tanana
Tapa-bolana izay no tsy nahitana an’irony tsiranoka fanasana tanana amin’ny famonoana ny tsimok’aretina irony intsony ireo taksibe miasa eto an-drenivohitra. Miandry ny fanomezana avy amin’ny fanjakana hatrany ireo kaoperativam-pitaterana manoloana ny fatiantoka lazain’ireo mpitatitra fa sedrainy ankehitriny.
Mampitombo ny vola mivoaka ny fiantohana an’io tsiranoka io nefa voafetra ny isan’ny mpandeha sy ora iasan’ny taksibe isan’andro, ao anatin’izao vanim-potoanan’ny hamehana ara-pahasalamana izao.
« Angatahinay fiaraha-miasa amin’ny fanjakana ny fanomezana an’io kojakoja io satria efa iaraha-mahafantatra ny fahasahiranana ankehitriny. Tokony izy ireo ihany no manome dia ny kaoperativa no mitsinjara azy mba hanamaivana ny vesatry ny fitohanan’ny fiara », hoy ny avy ao amin’ny kaoperativa Tselatra.
An-kilany, nilaza ny avy eo anivon’ny kaominina Antananarivo renivohitra (CUA) fa tsy vitan’izy ireo ny hisahana ny famendrahana ny ranom-panafody amin’ireo taksibe sady hizara fangaro fanasana tanana ho an’ny mpandeha. Tokony hifampizarana ny andraikitra.
Fantatra fa fifanarahana nifanaovan’ny CUA tamin’ny kaoperativam-pitaterana ny fiantohan’ireo mpitatitra an’izany tsiranoka fanasana tanana izany. Iarahan’ny rehetra, hoy ny fiadidiana ny tanàna, ny ady an’ny coronavirus. Misy amin’ireo kaompanian-tsolika, toy ny Galana, kosa no milaza ny hanampy ny mpitatitra amin’ny fanomezana tsiranoka fanasana tanana an’ireo taksibe mividy solika eny amin’ny tobin-dasantsin’izy ireo, nanomboka omaly hatramin’ny faran’ity volana mey ity.
Faha-60 taonan’ny fahaleovantena :: Hanomboka ny fanomanana an’ireo hetsika samihafa
Fisorohana fanararaotam-pahefana :: Hanara-maso ny mpitandro filaminana Mbola mila ezaka ! ny Transparency International